Ulauncher sy Synaps: mpandefa fampiharana 2 tsara ho an'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Rehefa avy nandrakotra be momba ny Tontolo Desktop (DE), ny Window Managers (WMs) ary ny Starters Managers (DMs), anio dia miverina amin'ny lohahevitry ny Application Launchers ho an'ny Linux, fantatra amin'ny anarany anglisy matetika, toy ny mpandefa. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia haneho hevitra izahay Ulancher sy Synaps.
Amin'ny fomba toy izany, mba hamenoana izay efa nozaraina momba ny Application Launchers (mpandefa) efa naneho hevitra, toy ny Brain, Albert ary Kupfer, amin'ity taona ity ihany.
Ho an'ireo izay tamin'izany fotoana izany, tsy nahita na nahita ireo boky navoaka taloha sy farany teo Brain, Albert ary Kupfer, azonao atao ny miditra amin'izy ireo, aorian'ny famakiana ity publication ity, amin'ny alàlan'ny fanindriana ireto rohy manaraka ireto:
Tsara ny manamarika, alohan'ny hidirana tanteraka amin'ilay lohahevitra, izany Application Launchers dia fitaovana na famenon-javatra izay ampiharintsika matetika ao amin'ny Rafitra fiasanay manatsara ny famokarana, amin'ny fampitomboana ny fanamorana sy hafainganana amin'ny fampiasana fitendry manatanteraka hetsika. Fihetsika izay tena ilaina tokoa, indrindra rehefa tsy a Tontolo iainana Desktop (DE) Mampiasa an Window Manager (WMs).
1 Ulauncher sy Synaps: mpandefa bebe kokoa ho an'ny Linux
Ulauncher sy Synaps: mpandefa bebe kokoa ho an'ny Linux
Araka ny ny tranokalan'i Ulauncher ao amin'ny GitHub, voafaritra toy ny:
"Ulauncher dia mpandefa fampiharana haingana ho an'ny Linux. Voasoratra amin'ny Python izy, mampiasa GTK +".
Anisany endri-javatra miavaka miavaka ity manaraka ity:
Fikarohana manjavozavo: Amin'ny alàlan'ny fanoratana ny anaran'ny fangatahana ao amin'ny boaty fikarohana pop-up azy dia azontsika atao izany nefa tsy manahy be loatra momba ny tsipelina, satria hiezaka izy hahalala izay tena akaiky ny zavatra tiantsika soratana na mihazakazaka. Aza adino koa ireo safidintsika teo aloha (lamina) ary safidio ho azy ny safidy tsara indrindra ho an'ny mpampiasa.
Lohahevitra manokana loko: Manolotra lohahevitra 4 natsangana ho an'ny mpampiasa ho an'ny interface graphic. Na izany aza, ahafahanao mamorona sy mampiditra lohahevitra loko manokana, arakaraka ny fomba fanao ao amin'ny rakitrao.
Hitsin-dàlana sy fanitarana: Satria mpandefa maoderina sy vaovao izy io, dia mikasa ny hanatsara ny fizotran'ny asa amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana sy fanitarana azo ekena. Mamela ireo izay manana fahalalana ilaina hamoronana, avy amin'ny hitsin-dàlana ho an'ny fikarohana Internet na script sasany, na ny fametrahana extension extension an'ny antoko fahatelo.
Fitetezana lahatahiry haingana: Ulauncher dia mamela ny hamakivaky ireo rakitra sy lahatahiry amin'ny alàlan'ny fanamorana, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny lakilen'ireo karazana Karakter «~» o «/» manomboka. Ary koa, tsindrio ny fitambarana fanalahidy «Alt+Enter» o «Alt+Número» mamela anao hanatanteraka mivantana ny sasany amin'ireo safidy aseho amin'ny karoka.
Ho an'ny misintona sy mametraka afaka mandeha mahitsy any amin'ny anao ianao fizarana fampidinana.
Araka ny ny tranokalan'i Synapse amin'ny Launchpad, voafaritra toy ny:
"NAMpandefa semantika voasoratra amin'ny Vala izay azo ampiasaina handefasana fampiharana ary koa hahitana sy hidirana amin'ny antontan-taratasy sy rakitra mifandraika amin'ny alàlan'ny motera Zeitgeist".
Ahafahanao mizaha entana tato ho ato.
Mazava sy haingana be amin'ny fikarohana anao io.
Izy io dia manana fanohanana tsara amin'ny fampiasana plugins, ohatra ho an'ny Devhelp, Diksionera ary ny baiko haingana an'ny Terminal.
Manome hery hanatanterahana hetsika mahasoa, toy ny, fitantanana fisie mozika tsy miankina na mifandraika amina mpilalao, karohy ireo rakitra ao amin'ny System Operating (Toerana, antontan-taratasy, sary, horonan-tsary, fifandraisana) manao fikarohana amin'ny Internet miaraka amin'ny DuckDuckGo, mitantana ireo fotoam-pivoriana Mpampiasa Gnome (Mihidy, manidy, mamerina), manao fikarohana hybrid amin'ny alàlan'ny Zeitgeist hitadiavana rakitra mitovy aminy, ary hampiato sy hampiatoana ny solosaina amin'ny fampiasana UPower, ankoatry ny zavatra hafa.
Ho an'ny misintona sy mametraka afaka mandeha mivantana amin'ilay tranokala ianao Launchpad na apetaho ao amin'ny trano fitehirizan'ny Distro anao amin'ny baiko baiko tsotra, toy ny nataoko, tamin'ny my MX Linux 19.2 Fitsinjarana:
Araka ny efa nohamarininao, Ulauncher sy Synaps dia rindrambaiko mpandefa fampiharana 2 tsara indrindra Brain, Albert ary Kupfer. Mijanona fotsiny ny mahita hoe iza amin'ireo 5 na hafa misy no mety indrindra amin'ny antsika Linux.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ireo mpandefa rindrambaiko 2 farany nantsoina ireo «Ulauncher y Synapse», izay mameno ireo teo aloha tamin'ny «Cerebro, Albert y Kupfer»; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ulauncher sy Synaps: mpandefa fampiharana 2 tsara ho an'ny Linux
CRIU, rafitra iray hamonjy sy hamerenana amin'ny laoniny ny toetoetran'ny fizotran'ny Linux
Raspberry Pi 400, RPi miendrika keyboard